War Cusub: Hanjabaad adag oo goordhaw katimid midawga yurub | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii War Cusub: Hanjabaad adag oo goordhaw katimid midawga yurub
War Cusub: Hanjabaad adag oo goordhaw katimid midawga yurub
Halkan ka aqriso warbixinta oo soomaali iyo ingiriis ah.
Hoggaamiyeyaasha Soomaaliya waxay u baahan yihiin inay helaan tanaasul horseedaya geedi-socod doorasho oo deg deg ah iyo awood wareejin nabadeed, iyadoo loo marayo hirgelinta heshiiskii Sebtember 17. Heshiis la’aanta hadda jirta waxay si weyn u daahineysaa xawaaraha isbeddelada sida degdegga ah loogu baahan yahay, ee loogu waxyeelleynayo muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Marka mudnaanta shaqsiyadeed ay ka sarreyso danta guud ee dalka, hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ayaa naftooda ku ceebeeya inay metelaan muwaadiniintooda. Kuwii wax u dhimaya wada hadalka ama adeegsiga rabshadaha waxaa loo soo bandhigi doonaa tallaabooyin waxayna la kulmi doonaan cawaaqibta ficilladooda.
Madaxda federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Soomaaliya waa inay sharfaan waajibaadka ka saaran dadka Soomaaliyeed isla markaana ay si deg deg ah u qabtaan doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha. Ma jiro wax beddel ah, geedi socod dhinac ah ama qayb ahaan ah oo heli doona taageeradeenna.
Previous articleBeesha Caalamka oo Cadaadis Xoogan saareyso Labada Isbaheysa ee isga soo horjeedo Doorashada Dalka
Next articleDowlada Norway oo Madaxweynaha Waqtiga ka dhacay ugu baaqday in Xukunka wareejiyo
Ganacsade Somali ah oo xaaskiisa oo Koonfur Afrikan ahayd dishay kadibna...
Warbaahinta taageerta Al-Shabaab oo baahisay sawirrada iyo muuqaallo laga duubay kooxdii...